Rayson | matraend matrages na igbe mmiri
Na Rayson, Mmelite teknụzụ na ihe ọhụrụ bụ uru anyị. Ebe ọ bụ na o guzobere, anyị na-elekwasị anya na ịhazi ngwaahịa ọhụrụ, imeziwanye ogo ngwaahịa, na ijere ndị ahịa ozi. matraep matrages na igbe anyị nwere ndị ọrụ ọkachamara na-enwe ahụmịhe nke ahụmịhe na ụlọ ọrụ. Ọ bụ ha na-enye ndị ahịa ọrụ dị elu karịa ụwa. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ gbasara matratedlọ ọrụ ọhụrụ anyị na akwụkwọ opupu ihe ubi ma ọ bụ chọọ ịmatakwu banyere ụlọ ọrụ anyị, nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị. Ndị ọkachamara anyị ga-ahụ n'anya inyere gị aka n'oge ọ bụla. Ọ ga-ahụrịrị ileru anya na n'ime, ha ga-ahụ ọmarịcha seams, nke na-eme ka ọ ghara ịka njọ ruo ogologo oge.